काठमाण्डौं उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा थप,के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन ? « Kalakhabar
काठमाण्डौं उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा थप,के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन ?
प्रकाशित मिति : सोमबार, ७ असार २०७८ १३:४४
कलाखबर,असार,७–काठमाण्डौं । बैशाख १६ गतेबाट निरन्तर रुपमा भएको निषेधाज्ञा पून एक साता थप गरिएको छ । आईतबार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर गरी तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । एक हप्ता निषेधाज्ञा थप गरिएपनि पहिलेको भन्दा अहिले केही कुरामा खुकुलो पारिएको छ । आईतबार बसेको काठमाण्डौं उपत्यकाका जिल्ला प्रशासनका कार्यलयको निर्णय अनुसार अब निजी सवारी साधन भने जोडबिजोडको आधारमा सञ्चालन गर्न दिने भएको छ ।
तरकारी पसल तथा खाद्य पसल अघिल्लो समयजस्तै विहान ११ बजे सम्म खुलाउने निर्णय भएको छ । अहिले कोरोना संक्रमण पूर्ण रुपमा नियन्त्रण भई नसकेकोले फेरि असार १४ सम्म एक साता लम्ब्याएको हो । आईतबारको संयुक्त बैठकले अबको एक साता लकडाउनमा के खुल्न मिल्छ ? के गर्न मिल्दैन ? यस बिषयमा पनि निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्नेगरी निषेधाज्ञाको मोडालिटीमा केही फेरबदल गरिएको बताए । उनका अनुसार अहिलेको लकडाउनमा सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङपुल, सैलुन, ब्युटीपार्लर, जिमखाना, पुस्तकालय, चिडियाखाना, रंगशाला र मानिसका भिडभाड हुने सबै प्रकारका कार्यक्रममा भने रोक लगाइने पहिलेको निर्णय कायम गरिएको छ ।
खुला स्थानमा मानिसहरू भेला हुन्, सभा, जुलुस, जात्रा, महोत्सवमा लगाइएको निषेध कायम गरिएको छ । फुटपाथमा हुने व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न पाइनेछैन । पुजारीबाट मठमन्दिरमा हुने नित्य पूजाबाहेक अन्य धार्मिक गतिविधिहरूमाथिको रोक कायम राखिएको छ । विवाह व्रतबन्ध घरबाट मात्रै गर्न पाइनेछ । यसरी घरबाट हुने विवाह व्रतबन्धमा पनि १० जनाभन्दा जम्मा हुन पाइनेछैन । अब एकैचोटी निषेधाज्ञा हटाउने भन्दा पनि अवस्था हेरेर विस्तारै मोडालिटी परिवर्तन गर्दै खुकुलो बनाउने सरकारले तयारी गरेको छ ।